China Stamping robhoti yePress Machine Manufacturer uye Supplier |Yunhua
HY1003A-098 ndiyo yakanyanya compact 6 Axis inobata robhoti, Inogona kushandiswa kutora nenzvimbo, zvidimbu zvidiki palletizing uye depalletizing, diki CNC muchina kurodha uye kurodha, nezvimwe.
-light uremu: 63kg chete;
-Kusvika kukuru: 980mm;
-Compact uye Flexible
Seimwe yerobhoti rinokurumidza, rakakwenenzverwa uye rinochinjika, HY 1003A-098 inogona kusangana neakawanda application ine ruoko rurefu runosvika asi huremu hudiki.Ichashandiswa nguva dzose kune zvikamu zviduku zvikuru.Iwe unogona kubatana nemuchina wekutsikisa kuburikidza nemasaini ekuchinjana ayo anogona zvizere synergy neCNC stamping muchina
Axis Max Payload Kudzokorora Capacity Environment Kurema Installation IP level
6 3KG ±0.03 1.6kva 0-45 ℃ Hapana hunyoro 63kg Pasi/madziro/ceiling IP65
Max Speed ​​​​J1 J2 J3 J4 J5 J6
145°/S 133°/S 140°/S 172°/S 172°?S 210°/S
Kuendesa uye kutumira
Yunhua kambani inogona kupa vatengi nemashoko akasiyana ekutumira.Vatengi vanogona kusarudza nzira yekutumira negungwa kana nemhepo zvinoenderana nekukurumidzira kwekutanga.YOO HEART kurongedza makesi anogona kusangana negungwa nemhepo zvinotakura zvinhu.Tichagadzirira mafaera ese sePL, chitupa chekwakabva, invoice uye mamwe mafaera.Pane mushandi ane basa guru nderekuti marobhoti ese anogona kuendeswa kune vatengi chiteshi pasina kurova mumazuva makumi mana ekushanda.
Q1.Iwe unopa mhinduro dzese dzekudhinda?
A. Hongu, tine chikwata chedu cheprojekiti uye tinogona kuita mhinduro.Asi kana munyika yako, tiine vatinoshanda navo chete, vachakubatsira kuita izvi.
Q2.Zvakadini nekudzidziswa kwechitambi application
A. Kutanga iwe unogona kuuya kufekitari yedu kuti udzidze zvakakwana robhoti yedu, iwe uchava ne3 ~ 5 mazuva ekusununguka kudzidziswa.
Kana tichida murume wedu kufekitari yako, mari yese ichave pauri.Uye mumwe wedu munyika yako anogona kukubatsira kuita izvi?
Q3.Nzira yekusarudza sei muenzaniso wakanaka wekutsika?
A. kutanga, une guru batch chimwe chigadzirwa, ipapo maererano chigadzirwa uremu kusarudza robhoti payload.
Q4.kana ini ndichida kutanga chirongwa chekutsikisa, ko nezve maitiro?
A. Kune mafekitari akawanda ane zvinodiwa zvakafanana, iwe unozofanirwa kuziva ruzivo rwechigadzirwa uye ruzivo rwechitambi.Tine chikwata chekuita ongororo.Kana tapedza ongororo, tichava nemhinduro, tozogovana kupa, uye tanga kugadzira.
Q5.ndinogona kuita mutengesi chete wekukanda zvitambi?
A, hongu, unogona,
Zvakapfuura: Sarudza uye isa robhoti yezvikamu zvidiki kudzidzisa marobhoti
Zvinotevera: Stamping Robot
Kudhinda robhoti yekugadzira otomatiki yekudhinda ...
Sarudza uye isa robhoti yezvikamu zvidiki kudzidzisa r ...